नेपाल आज | जनार्दन शर्मा जंगिएपछि नेकपामा हल्लीखल्ली, प्रधानमन्त्री र ईश्वर पोखरेल निराश
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद जनार्दन शर्माले स्वेतपत्र जारी गरेर कसैलाई नतर्साउन चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै शर्माले गलत तथ्यहरू राखेर स्वेतपत्रको नाममा कसैलाई नतर्साउन चेतावनी दिएका हुन्।
शर्माले आफूले गृहमन्त्रीबाट २०७४ असोज ३० गते नै राजीनामा दिए पनि २०७४ कात्तिक १३ गते भएको भनिएको निर्णयमा आफ्नो नाम जोडिएको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले २०७४ असोज ३० गते नै आफू गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको उल्लेख गर्दै उनले तर्साउन नाम जोडिएको हो ? वा मलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजिएको हो? भन्दै प्रश्‍न गरे। उनले आफुलाई तर्साउन खोजिएको भए पनि आफु असत्यको सामु नझुक्ने बताए।
‘यदि त्यसरी यहाँ मलाई तर्साउन खोजिएको हो भने म असत्यको अगाडि कहिले पनि तर्सिन्न। सरकारले मलाई ढाट्न सक्ला तर जनता र मतदातालाई ढाँट्न सक्छ? जनता र मतदातालाई ढाँट्ने सरकारले कहिले पनि काम गर्न सक्दैन्' उनले भने, 'कसरी विश्वास गर्ने यहाँ विश्वासको संकट पर्‍यो। विश्वासको संकट पर्‍यो यहाँ। नभएको मान्छेको नाम लेखेर मिडियाबाजी गराउने काम किन गरियो। मलाई शंका उत्पन्न भयो। मलाई जवाफ चाहिन्छ विश्वासको संकट पर्‍यो।’
आफूले सरकारविरुद्ध कुनै गलत कुरा नबोलेको भए पनि आफूलाई किन तर्साउन खोजियो भन्दै उनले प्रश्‍न गरे। ‘म अचम्ममा परे यो स्वेतपत्र हो की अस्वेत पत्र हो। मैले कुनै गलत कुरा त बोलेको छैन तर राज्यव्यवस्था समिति हुँदा कुनै ऐन आउँछन् जो ऐन संविधानभन्दा बाहिर आएर ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने कुरामा बोल्छु। परिमार्जन गर्न म पनि लाग्ने गरेको छु' उनले भने 'अर्को कुरा विकाश समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ। सरकार दलालको घेराबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। जनताको विकास निर्माणको तीव्र चाहाना छ। सरकारले यसतर्फ जानुपर्छ भनेको छु। अरु केही गरेको छैन।’
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयमा नाम उल्लेख नहुनु र त्योभन्दा अगाडिको सरकारले गरेका निर्णयमा नाम लेखिनुले पनि आशंका उब्जाएको बताए।
उनले भएको नाम नलेख्ने तर नभएको नाम लेख्ने भन्दै यसको जवाफ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले दिनुपर्ने बताए। शर्माले ट्रष्टले लिजमा दिएका सबै सम्पत्ति फिर्ता गरेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढुनपर्ने मागसमेत गरे।